Hery Rajaonarimampianina : « Tokony hiova ny endriky ny toe-tsaina eto amin’ny firenena » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Tokony hiova ny endriky ny toe-tsaina eto amin’ny firenena »
06/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy ampihambahambana no nanambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nanoloana ny mpanao gazety omaly, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, fa tokony hiova ny toe-tsaina fa tsy ny endriky ny tanàna sy ny endriky ny firenena ihany. “Tokony hiova, hibanjina ny fandrosoana sy fampandrosoana, hibanjina ny tsara, hibanjina izany manaraka ny fenitra misy iraisan’izao tontolo izao sy maneran-tany izany isika. Antoka iray hoentina manatsara hatrany ny fampandrosoana eto amin’ny firenena izany”, hoy ny Filohan’ny Repoblika
Raha nilaza ny mahakasika ny fanitarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, Ravinala Airports, mantsy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, dia tafiditra indrindra amin’ilay fametrahana fotodrafitrasa fototra izany. Tsy vitan’ny fametrahana fotodrafitrasa fototra ihany, raha ny nambaran’ny Filoha hatrany, fa miteraka asa ho an’ny Malagasy ihany koa izany asa izany, ary rehefa tontosa sy tafapetraka ny fotodrafitrasa, dia mbola miteraka asa vaovao ihany koa. “Ilay fametrahana fotodrafitrasa fototra dia entina hanorenana sy hanarenana ny firenena sady miteraka asa no miteraka fampandrosoana, ary indrindra manova endrika ny tanàna ihany koa”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mantsy fa 300 ireo mpiara-miasa amin’ny fananganana ilay fotodrafitrasa vaovao amin’ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ravinala Airports , ary efa nanaraka fiofanana izy ireo. Hiakatra 500 ny isan’ireo mpiasa aoriana kely ao. Noho izany, hoy hatrany ny Filoha, dia miteraka asa hatrany hatrany ny fametrahana ireny fotodrafitrasa isan-tokony ireny.
Ankoatra izay, dia anisan’ny fanambin’ny Filoham-pirenena ny fampanaraham-penitra ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. “Tany amin’ny 1968 no nananganana ilay seranam-piaramanidina sy ilay fotodrafitrasa ho amin’izany voalohany. 50 taona aty aoriana vao nisy fanitarana sy fanatsarana izany”, hoy ny Filoham-pirenena.